गिता छोयर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका कमल थापा नयाँ पर्टी खोल्दै ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
गिता छोयर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका कमल थापा नयाँ पर्टी खोल्दै !
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले हिन्दुहरुको पवित्र धर्मग्रन्थ भागवत गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाँदा उनीसहित निवर्तमान अध्यक्षहरु पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि त्यसरी नै कसम खाएका थिए ।
आफूहरुले कसम खाएको विषय थापाले राप्रपाको महाधिवेशनको बेलामा पनि उल्लेख गरेका थिए ।
राप्रपाको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा थापाको बहुमत छ । तर, थापाको हारसँगै कतिपय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिङ्देनसँग निकटता बनाइसकेका छन् । यसकारण पनि थापा छिट्टै नयाँ निर्णयमा पुग्ने बुझिएको छ ।
अब उनले राजसंस्थाको मुद्दा त्याग्ने र हिन्दुराष्ट्रको मात्र मुद्दा उठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।